Ubuzwe be-Antigua neBarbuda - Ukutshala imali kwebhizinisi elilodwa
I-Citizenship by Investment Unit (i-CIU) yenza izincomo kwiKhabinethi ukuze ivunyelwe amabhizinisi, noma ngabe akhona noma ahlongozwayo, ngenhloso yokutshala imali ebhizinisini ngaphansi koHlelo Lobuzwe nge-Investment Program.
Lezi zinketho ezimbili zokutshala imali zebhizinisi yilezi:
Umfakisicelo omkhulu, ngokwakhe, wenza imali ebhizinisini elivunyiwe okungenani lase- US $ 1,500,000
Ubuncane babantu aba-2 bokwenza imali ngokuhlanganyela ebhizinisini elivunyiwe elibiza okungenani ama-US $ 5,000,000. Umuntu ngamunye uyadingeka ukuthi afake isandla okungenani ama-US $ 400,000 ekutshalweni kwemali ngokuhlanganyela. Ukufaka isicelo sobuzwe ngokutshalwa kwemali kungathunyelwa kuye, egameni lakhe noma egameni lakhe.
Lapho sekuvunyelwe imvume yotshalo-mali lwebhizinisi, i-CIU izobheka izicelo zobuzwe. Inqubo yokufaka isicelo iyefana naleyo ye-NDF, okuwukuthi, lapho ufaka isicelo sakho uzocelwa ukuthi ukhokhe imali efanele kanye ne-10% yemali ekhishwa nguhulumeni. Lapho uthola incwadi yemvume uzocelwa ukuthi ukhokhe imali esele yezezimali zikahulumeni nemali oyitshalile ebhizinisini kungakapheli izinsuku ezingama-30. Ngenxa yokuhlukahluka okungahle kube khona kwalokhu kutshalwa kwezimali noma yisiphi isivumelwano se-escrow kuzoxoxiswana ngaso phakathi kwamaqembu okwamanje ukudluliswa kwezibalo zokutshalwa kwemali kufanele kwenziwe zingakapheli izinsuku ezingama-30 kusukela kukhishwe incwadi yokuvuma.
Okwesicelo esisodwa, noma umndeni wabane noma ongaphansi
Okomndeni wabangu-5 noma ngaphezulu: -
Uma sesitholile, isitifiketi sobhaliso sizonikezwa womfakisicelo wokuqala kanye namalungu omndeni wabo azothunyelwa ehhovisi lepasipoti ngesicelo sabo kanye nanoma yimiphi imibhalo ehambisana nayo.
Umenzeli / ummeli wakho ogunyaziwe uzokweluleka ngezinsuku ezitholakala kunoma yiluphi:
Vakashela i-Antigua neBarbuda ukuqoqa ipasipoti yakho futhi uthathe isifungo noma isiqinisekiso sokuqina.
Vakashela i-Embassy, ​​High Commission noma i-Consular Office yase-Antigua neBarbuda ukuyolanda ipasipoti yakho nokwenza isifungo noma isiqinisekiso sokuthembeka. Xhumanisa namaNxusa / amaKhomishini aPhezulu / amaHhovisi obuMmeli akhonjiswe kwelinye ikhasi.